Tsy nisy na inona na inona teo amin’ny tany. Sahala amin’ny sary hitanao eto no fijery azy. Tsy nisy na voninkazo na hazo na biby. Tsy nisy hazandrano akory tao amin’ireo ranomasina. Mbola nanana asa be tokony hatao Andriamanitra mba hahatonga ny tany hahafinaritra tokoa ny biby sy ny olona ny fipetrahana eo aminy.
Hizara Hizara Manomboka Mamorona Andriamanitra
my tant. 1